The iPhone 7 na-hụrụ ọzọ na a ẹdụk oyiyi na-egosi ya ọhụrụ igwefoto | Akụkọ akụrụngwa
Na-esote Septemba, ọ bụrụ na asịrị ahụ adabaghị, Apple ga-ewepụta ihe ọhụrụ iPhone 7 que na awa ikpeazụ ọ hụrụ ya ọzọ na a kpochara oyiyi, na-enweghị akara mmiri na ebe ekpughere ụfọdụ nkọwa nke imepụta ọhụụ nke akụrụngwa Cupertino.
E wezụga imewe nke azụ, ọ na-enyekwa anyị ohere ịhụ igwefoto ọhụrụ iji tinye iPhone 7 na nke anyị ka maara banyere ọtụtụ nkọwa. Ma ọ bụ na ọtụtụ ndị na-atụ aro na ọ ga-enwe ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke megapixels na ndị ọzọ na mmụba nke nha nke a na-ahụ na onyonyo a ga-abụkarị ijidekwu ọkụ.
Dika onyogho a na - emekaria, o nweghi onye kwadoro ya, obu ezie na oburu na oge a odi ka odi ezigbo na ihe nile gosiputara na a ga-akpọpụ ya na mpụga ụlọ ọrụ Lite-On, otu ụlọ ọrụ ọkachamara na nkà na ụzụ.
Banyere imewe ahụ na oyiyi edozi nke iPhone 7, ị nweghị ike ịhụ oke akụkọ, ọ bụ ezie na ọ dị ka anyị ga-ahụ mgbanwe na nsọtụ nkuku n'ihi mwepụ nke eriri antenna. Nke a na-eme ka n'azụ echiche nke ọhụrụ iPhone Cleaner mgbe tụnyere iPhone 6S.
Maka oge anyị ga-echere, ịga n'ihu ịmara nkọwa gbasara iPhone 7 ọhụrụ, ebe anyị na-eche maka ngosipụta nke ngosipụta nke ngwaọrụ Apple ọhụrụ.
Kedu ihe ị chere banyere igwefoto na usoro ọhụụ nke iPhone 7 nke anyị hụrụ na onyonyo enyo?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » A na-ahụ iPhone 7 ọzọ na onyoyo edozi na-egosi igwefoto ọhụrụ ya
Asus ZenFone 3 Deluxe, ama izizi nke nwere snapdragon 821 processor